ပျော်စရာကောင်းလို့ အောက်မေ့တယ်.. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ဟယ် အမတို့က တော်တော်ဆိုးး)
ဒါပေမယ့် တခုရှိတာ ငယ်ငယ်က ဆိုးသမျှဟာ ဘယ်သူ့ ကိုမှ နစ်နာစေချင်တာမျိုး လုံးဝမပါတဲ့ ဖြူစင်မှုအပြည့်နဲ့ပဲ ။
မိုးချိူသင်း အရေးကောင်းလို. တို. လဲ အတွေးတွေ ဆန့်သွားလိုက်တာ. မောင်နှမ တွေ ကို လွမ်းလိုက်တာ. ။ ..မရှိတော့တှဲုံ အဖေနဲ. အမေ ကို လဲ သတိရ လိုက်တာ.။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘလော.ဖြစ်နေပြီ MCT ရေ.။
အမရယ် လိုက်ကာတန်းကြီးပြုတ်ကျတယ်တဲ့။ ရယ်လိုက်ရတာ တယောက်ထဲအသံတွေထွက်လို့။
လူကြီးတွေကို အတော်နောက်ခဲ့တာနော် ဟား ဟား ဟိုလမ်းပြတဲ့ဦးကြီးတော့ ကလေးအုပ်ကြီးကို လိုက်ထုချင်နေလောက်တယ်။
“ဒို့ငယ်ငယ်တုန်းအရွယ် ယောင်ပေစူးလေးတွေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကို ညာဘက်လုပ်ကာ ကျီစားခဲ့တယ်..
ပြေးလွှားပျော်ပါးတယ် ဆယ်ပြားတွေတလိမ့်ကြီးနဲ့ ဒရိုင်ဘာကြီးစိတ်ဆိုးအောင် ပြုစားပြန်တယ်...“
မဇနိ ပြောသလိုပဲ- အသံထွက် ပြီး တောင် ရီ မိ တော့တယ်။
အဲလို ဘ၀ မျိုး တွေက..ကျမ တို့မျိုးဆက် မှာ..တော်တော်တူ ကြတယ်နော်။ မိသားစု တွေမှာ- မောင်နှမ က..၃ ယောက် ကနေ.. ၅ ယောက် ။ ဘေးနီးနားချင်း ကလေး တွေ နဲ့..ရော နှော ဆော့လှောင်။ မိဘ တွေ ကလည်း.. ခု ခေတ်လို အရိပ်တကြည့်၂ ပိုးမွေး ပြီး..ပူ မနေ ဘူး။ ကလေး ချင်း မောင်နှမ ချင်း ပြန် ထိန်းသွား တာပဲ။ ခု ခေတ်လို..ဂိမ်း စက် နား မှာ ထိုင် ဆော့ စရာ လည်း မရှိ။ မြေကြီး နဲ့ အမြဲ ထိစပ် ပြီး.. ဆော့လှောင် ပျော်ပါး နေ ကြ တာ ပဲ။
မျိုးဆက် တွေ..ခေတ် တွေမတူ တော့ဘူးနော်- အင်း လွမ်းတယ်..လွမ်းတယ်။
ဟုတ်တယ်.. ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း အဲဒီလိုပဲ။ မောင်နှမ အရင်းတွေ ၀မ်းကွဲတွေနဲ့ တပြုံကြီးဆော့ကြတာ….
များသောအားဖြင့် အဒေါ်တယောက်အိမ်မှာ စုပြီး ဆော့လေ့ရှိတယ်လေ။ အဲဒီတုန်းက ခြောက်လမာလကာပင် (ကီလိုမာလကာလို့လည်းခေါ်တယ် - စိုက်ပြီး ခြောက်လဆို အသီးသီးတယ်ဆိုပြီး အပင်ကို ရောင်းတာလေ) ဆိုတာ ပေါ်ကာစ ခေတ်စားကာစပေါ့… အဲဒီအဒေါ်က ခြောက်လမာလကာပင်ကိုစိုက်ထားပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ပေါ့။ မာလကာပင်ကတော့ ခြောက်လလည်းမသီး၊ တနှစ်လည်းမသီး နဲ့ပေါ့။ အသီးသီးမလို အပွင့်လေးပွင့်လိုက် အသီးမတင်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာ။
တရက်ကျ ဆော့နေရင်း ပျင်းလာတော့ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့…. အဲဒါနဲ့ အဒေါ်ကိုစဖို့ အကြံရလာပါတယ်။ တခြားမာလကာပင်ကနေ အသီးနုနုလေးတွေခူးပြီး ခြောက်လမာကာပင်မှာ အပ်ချည်ကြိုးနဲ့ချည်ပြီးထားပါတယ်။ သူ့အပင်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နေတဲ့ အဒေါ်ကလည်း သူ့အပြင်ပေါ်မှာ အသီးလေးတွေရှိနေတာကို နေ့ချင်းသိသွားပြီး သူ့ရဲ့မာလာကာပင်က တနှစ်ပဲရှိသေးတာ သီးနေကြောင်းကို ရှိတဲ့လူတွေကို ၀မ်းသာအားရပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ နောက်ကနေ ကြိတ်ပြီး တခွိခွိနဲ့ရီနေတာ…
အဒေါ်လည်း အပင်နားသေချာသွားကြည့်ရော… ချည်ထားတဲ့ကြီုးကိုတွေ့ပြီး မာလကာသီးအတုတွေဖြစ်တာသိသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း တဟီးဟီးနဲ့ရီနေတော့ ဘယ်သူလုပ်တယ်ဆိုတာသိသွားပြီး ကောင်လေးတွေ လူကြီးကိုတော်တော်နောက်တယ် ဆိုပြီး စိတ်မဆိုးပဲ ခေါင်းကိုပုပ်သွားပါတယ်…. :P
ခစ်ခစ် .. ခစ်..
ဟုတ်ပါ့မမိုးချိုသင်းရေ..မောင်နှမတွေအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ငယ်ဘ၀ကတော်တော်ပျော်ခဲ့ရမှာပဲနော်။ ကျမတို့တွေတုန်းကလည်းကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုလာသမျှမုန့်သည်တွေကိုအော်အော်ခေါ်ပြီးပြေးပုန်းနေခဲ့တာ။ မုန့်သည်တွေကအသံကြားပြီးရှာမတွေ့လို့ပွစိပွစိနဲ့လုပ်တော့လူကြီးတွေကအားနာလို့ဝယ်ကျွေးရတော့တာပေါ့။အဟဲ
မစန္ဒာရဲ့ အရိပ်ထဲက အမာညိုက အမနဲ့တောင်တူသလိုလို။ တယ်လည်းဆော့သကိုး.....။ အမရေ ကျနော့ဆီမှာ အမှတ်တရလေးတွေလာရေး ပေးနေတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
August 30, 2008 at 6:43 AM
မအေးက တော်တော်creativeဖြစ်အောင် နောက်တတ်တာပဲနော် မ… အဲလို အမတွေနဲ့ နေရတာ သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းမှာပဲ… ငယ်ငယ်က အဆော့သန်တဲ့ ဘ၀ကို ပြန်လွမ်းသွားတယ်…
အစ်မရေ... ပျော်စရာကြီး။ အစ်မတို့ ငယ်ဘ၀မှာ ပုံရိပ်လည်း ၀င်ပါချင်လိုက်တာ။
ငယ်တုန်းက အိမ်ရှေ့က ပလက်ဖောင်းမှာ ကစားခဲ့ကြတာကို သတိရမိတယ်..
ဟုတ်တယ် သမီးလဲ ငယ်ငယ်တုန်းက ဧည့်သည်ကျွေးတဲ့မုန့်ကို အရမ်းစားချင်တာပဲ ဒါကြောင့် အခုလဲ ဧည့်သည်ပဲ လုပ်စားနေတယ်။ ဟားဟားဟား
ငယ်ငယ်တုန်းက GreenGirlလည်း အဆော့ကောင်းလို့ လမ်းထိပ်က ကင်းတဲပေါ်ကတောင် ပြုတ်ကျပြီး တံတောင်ဆစ်နာသွားဖူးသေးတယ်...အဟိ :P
ညီမရေ... အကို့ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့ကျေးဇူးပါ။ ညီမဘလော့ဂ်က ပို့စ်တွေကို ဖတ်မိမှ တော်တော်အရေးကောင်းပြီး ရသတွေစုံတာကို သတိထားမိတယ်။ ကျေးဇူးညီမ၊ နောက်ထပ် အမြဲတမ်းလာလည်စရာ တိုးတာပေါ့။ အကို့ ဘလော့ဂ်မှာလဲ ညွှန်းပါရစေ...
အစ်မရေ... အမြဲလိုလို လာဖတ်ပေမယ့် အခုမှ ကွန့်မန့်ရေးတာ၊ အစ်မရေ.. အစ်မကို ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ အီးမေးလိပ်စာလေးကို ပေးလို့ရလားအစ်မ... အစ်မရဲ့ တလွဲတွေနဲ့ပဲ နေသားကျ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို ကျမတို့ ချိုးလင်းပြာ အမျိုးသမီးစာစောင်မှာ ပြန်ဖော်ပြချင်လို့ ခွင့်တောင်းချင်လို့ပါ။ ကျမအီးမေးက b0atb0at86@yahoo.com ပါအစ်မ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်ဆက်သွယ်ပေးပါနော်အစ်မ။
I also want to write as burmese language but i do not know how to write I did not see your blog before i abored on every sat and sunday now i am happying with your post because here i am only one burmese nationality which is barcelona in spain.